Waydiimaha jawaabaha loo waayay ee Zimbabwe - BBC News Somali
Image caption Maxaan maalmo loo arkin Robert Mugabe , ahalkee se xaaskiisa ku sugan tahay?
Iscasilaadii uu Robert Mugabe, xilka ka daggay ka dib ku dhawaad 40 sano oo uu Zimbabwe xukumayay ayaa ahayd mid u dhacday si lama filaan ah, dhaqso ah islamarkana uusan dhiig ku daadan.
Wax ka yar hal toddobaad markii ay militariga ay awoodda la wareegeen ayaa waxaa jira madaxwayne cusub oo lagu wado in uu xilka qabto.
Xisbigiisii hore ee siyaasadda iyo militariga waxa ay sheegayaan in howsha ay si caadi ah u socoto.
Balse waxaa jira waxyaabo badan oo aanan wali ogayn .
Afgambiga ma waxa uu u dhacay si loo difaaco madaxa militariga?
Militariga ayaa soo faragaliyay xaaladda ka dib markii xilka laga qaaday madaxwayna ku xigeenka Emmerson Mnangagwa, taasi oo loo arkay in ay tahay mid wadada loogu xaarayay in Mr Mugabe ay badasho xaaskiisa.
Laakiin waxaa laga yaabaa in ay jiraan dhinacyo kale oo door ka ciyaarayay.
Dhibaatada ayaa markii ugu horreysay bilaabatay maalmo ka hor markii madaxa militariga Gen Constantine Chiwenga uu uga digay Mr Mugabe dhibaatada ka dhex jirta xisbiga talada haya ee Zanu-PF iyo xasaradda siyaasadeed.
Waxa uu dareemay in dadkii u soo dagaalamay xorriyadda - sida Mr Mnangagwa la bartilmaameedsaday.
Gen Chiwenga ayaa la sheegay in uu Shiinaha uga qaybgalayay kulan militari ,waxaana jira warar sheegayay in la qorshaynayay in la xiro marka uu dalka ku soo laabanayo.
Sawirro : Xukunkii Mugabe ee muddada dheer
Image caption Gen Chiwenga qudhiisa ayaa xarig ka badbaaday
Hasa yeeshee Janaraalkan ayaa ka war helay shirqoolka loo maleegay ,waxa uun garoonka diyaaradaha kula kulmay tira ka mid ah ciidamadda si loo xaqiijiyo difaciisa.
Ka dib ayay militariga xabsi guri ka dhigeen Mr Mugabe.
Militariga ayaa lagu ammaanay faragalintooda ,balse waxaa sidoo kale suuragal ah in ay danahooda difaacayeen.
Ma geesi buu ahaa mise nin dalkiisa ragaadiyay
Halkuu ku sugan yahay Robert Mugabe?
Mr Mugabe ayaa maqnaa ilaa Axaddii aanu soo dhaafnay.
Madaxwaynihii hore ee Zimbabwe oo 93 jir ah ayaa xabsi guri laga dhigay 14 bishan November.
Tan iyo xilligaasi waxaa gaar laga hayay gurigiisa oo ah nooca lagu raaxeesto oo ku yaalla duleedka caasimadda Harare.
17 November, ayaa isaga oo ay militariga ilaalinayaan waxa uu ka qayb galay xaflad qalinjabin jaamacada dalkaasi ku taalla.
Laba maalin ka dib,waxa uu khudbad si toos ah uga jeediyay Telafishinka isaga oo aqriyay khudbad la soo diyaariyay.
Balse tan iyo wixii ka dambeeyay xilligaasi ,xitaa iscasilaadiisii waxa ay ahayd mid qoraal ah oo baarlamaanka laga aqriyay.
Maxay ahayd khudbaddii lagu wareeray ee Talefishinka uu ka jeediyay?
Khudbaddii uu Mugabe jeediyay Axaddii ayaa mid ka mid ah waraiyayaasha BBC waxa uu ku tilmaamay "20 daqiiqo oo ahayd khudbad wareer ah".
Maalmo ka dib oo ay iska caddeyd in militariga ay dalka ka talinayeen, Mr Mugabe ayaa khudbaddii uu ka jeediyay talafishinka waxaa la filayay in uu iscasilo.
Taa badalkeeda, Mr Mugabe waxa uu jeediyay khudbad qalalan taasi oo wax yar ka tilmaamtay baaqyada baahsan ee ku saabsan in uu xilka ka dago.
Waxyaabaha la yaabka lahaa waxaa ka mid ah in Mugabe uu sheegay in uu shir gudoomin doono shirwaynaha xisbiga talada haya ee dhici doona bisha December.
Balse xisbiga ayaa khudbadiisa ka hor ka cayriyay hogaaminta xisbiga.
Mid ka mid ah wariyayaasha BBC ayaa si dhaw u eegayay warqadaha uu khudbadda ka aqrinayay oo isku qasmay,waxaana dhaqdhaqaaqiisa si dhaw ula socday Janaraalada militariga.
Markii uu khudbadda dhameeyay ayaa waxa soo baxay su'aalo badan: Ma waxa uu aqriyay khudbad qaldan?
Dadka ku falan isticmaalka baraha bulshada ayaa aad u baahiyay muuqaal muujinaya in inta Mugabe uusan khudbadda bilaabin rugjad warqado ah ay dhulka ku daateen, hoostana la'isaga dhiibayo.
Xitaa ninka awoodda badan ee hogaamiya kooxda dadkii u soo halgamay xorriyada, Chris Mutsvangwa, waxa uu sheegay in Mr Mugabe uu ka leexday khudbaddii lagu heshiiyay.
Waxaa sidoo kale lagu micneeyay in Mugabe uu xilligaas doonayn in uu iscasilo isaga si toos ah looga daawanayo TV-ga ,ayna barbar fadhiyaan militariga.
Muxuu habada si lama filaan ah isugu casilay?
Ka dib markii uu sheegay in uu sii wado doono in uu xilka sii hayo isaga oo diiday dhammaan baaqyadii loo soo jeediyay ayaa mar kale Mugabe la waayay.
Militariga ayaa waxa ay sheegeen in ay isku raaceen hannaan looga arrinsanayo mustaqbalka Mugabe ,balse ma aysan shaacin waxa uu hanaankaasi yahay.
Ka dib Talaadadii, baarlamaanka Zimbabwe ayaa waxay bilaabeen geedi socod ay xilka uga qaadayaan Mugabe.
Iyada oo lagu guda jiro dooda xil ka qaadista,ayaa af-hayeenka baarlamaanka waxa uu hakiyay dooda ,isaga oo sheegay in uu helay warqad cinwaankeedu yahay "Ogaysiin iscasilaad " ka dib barlamaanka ayaa sacab iyo sawaxan isku daray.
Balse Mr Mugabe kuma uusan sugnayn goobta,tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyay na Mugabe ma uusan hadlin.
Way iska cadahay in Mr Mugabe uu ka maaganayay bahdilaad oo uusan doonayn in xil ka qaadis lagu sameeyo ,balse sidoo kale ma cadda in ay qayb ka ahayd iscasilaadiisa hanaankii ay militariga sheegeen.
Hadda halkuu ku dambayn doonaa mustaqbalka Mr Mugabe?
Ka madaxwayne ahaan, Mr Mugabe waxa uu haystaa xasaanad hor istaagaysa in la maxkamadeeyo, xitaa haddii ay jiraan dacwado la doonayo in lagu soo oogo.
Waxaa sidoo kale jirta xaqiiqada ah in uu Mugabe imika yahay nin waayeel ah islamarkana waqtigiisa inta badan uu dibadda dalka u aado xaalado caafimaad.
Xitaa hogaamiyaha mucaaradka Morgan Tsvangirai ayaa sheegay in Mr Mugabe loo ogolaado "in uu nasto maalmihiisa ugu dambeeya".
Waa uu door bidi karaa in uu dibadda uu aado badalkii uu ku noolaan lahaa dal uu u arko in uu ku soo jeestay.
'Dimuqraadiyad cusub oo ka curatay' Zimbabwe
Mnangagwa oo Zimbabwe ku laabtay si uu u badalo Mugabe
Dalka Singapore ayaa ah mid ka mid ah wadamada mr Mugabe laga yaabo in uu aado ,maadaama halkaasi in ka badan toban jeer lagu soo daweeyay.
Khiyaarka kale ee u furan Mr Mugabe ayaa sidoo kale ah in uu u kicitimo dalka Konfur Afrika ,maadaama Mr Mugabe uu saaxib dhaw la yahay madaxwayne Jacob Zuma - Balse Mr Zuma waa in uu ka fikiraa sida ay u arki karaan tillaabadan codbixiyayaashiisa.
Xaaska Mr Mugabe ,Grace ayaa sidoo kale horrey loogu eedeeyay in ay waxyeelo u gaysatay gabar ka shaqaynaysay Hoteel ay daganayd dalka Koonfur afrika bishii August.
Muxuu noqon doonaa mustaqbalka,Grace?
Mrs Mugabe, oo mar u tartamaysay xilka madaxwaynaha marka uu seygeeda ka dago xilka ,ayaan wax war ah laga hayn tan iyo intii ay militariga soo faragaliyeen xaaladda dalka.
Waxaa la rumaysan yahay in si la mid ah seygeeda ay xabsi guri ku jirto.
Balse tillaabadii ay qaadeen militariga ka hora ayay wararka qaar sheegayaan in ay dalka ka carartay.
Militariga ma aysan xaqiijin goobta ay ku sugan tahay islamarkana laguma arag goob fagaaro ah oo Mugabe lama aysan socon markii uu khudbadda jeedinayay.
Saraakiisha xisbiga Zanu-PF ayaa Mr Mugabe waxa ay ku eedeeyeen in uu xaaskiisa siiyay "awood aysan dastuur ahaan xaq u lahayn.
Markii xisbiga Zanu-PF laga cayriyay Mrs Mugabe Axaddii ,ergada xisbiga waxay sheegeen in la maxkamadayn doono,balse ma cadda dacwadaha lagu soo oogi doono.
Xildhibaannada Zimbabwe ayaa damaashaaday markii waraaqda is casilaadda loo akhriyay
Goormaa la qaban doonaan Doorashada Zimbabwe?
Dalka Zimbabwe ayaa lagu wadaa in doorashada ay ka qabsoonto ka hor bisha September 2018.
Sida uu dhigayo dastuurka Zimbabwe doorashada madaxwaynaha iyo baarlamaanka ayaa qabsoomaya isku waqti.
Taariikhda la qabanayo doorashada wali lama shaacin ,balse saraakiisha xisbiga ayaa soo jeediyay in madaxwayna ku xigeenkii hore Mr Mnangagwa uu xilka sii hayo ilaa waqtiga doorashada laga garayo.
Balse doorashooyiin waa la qaban karaa haddii baarlamaanka loo codeeyo in la kala diro ama haddii ay yimaadaan duruufo kale.